Hilton Myanmar na-agba ndị isi ụlọ nkwari akụ Ashok Kapur n'ọrụ
Home » Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa » Ozi banyere Myanmar » Hilton Myanmar na-agba ndị isi ụlọ nkwari akụ Ashok Kapur n'ọrụ
Hilton Hotels & Resorts na Myanmar ekwupụtala ọkwa nhọpụta Maazị Ashok Kapur dịka Onye Isi ofyọkọ nke Development Business.
Otu onye agha nke ụlọ ọrụ nwere ihe karịrị afọ iri abụọ nke ahụmahụ na njem na ile ọbịa, Maazị Kapur na-esonye n'oge iji wusie ọnụ ọgụgụ Hilton na-eto eto na mba ahụ ike.
“Maazị Ọkachasị Ashok Kapur n'ahịa ga-apụta n'ógbè ahụ ga-aba nnukwu uru ka anyị na-aga n'ihu na mgbasawanye anyị na Myanmar. Helen Jacobe, Cluster General Manager nke Hilton na Myanmar kwuru.
Site na India, Maazị Kapur nwere nzere Masters na Business Management na diplọma na njikwa Hotel. Ya na ezinụlọ ya kwagara Mianmaa na Eprel. Maazị Kapur ga-ebugharị Ahịa, PR, Azụmaahịa, Ego, Ndozi, na Ọrụ Ahịa maka ụlọ Hilton niile dị na Myanmar ma kwado atụmatụ azụmahịa maka atụmatụ maka mmepe.
Maazị Kapur dị ugbu a na Office nke lusyọkọ na Hilton Mandalay. N’ikwu okwu banyere nhọpụta ahụ, Maazị Kapur kwuru, “A kwanyere m ugwu isonyere ndị otu Hilton n’oge ọmarịcha mmepe a. Ọmarịcha ihe nketa na ịma mma mara mma nke Myanmar mere ka ọ bụrụ ebe dị ịtụnanya. ”
Ebumnuche dị n'etiti Mandalay, nke dị nso na Royal Palace, Hilton Mandalay bụ ụlọ nkwari akụ mba ụwa mbụ na obodo ahụ na-enye ebe obibi dị elu, iri nri klaasị ụwa, na oghere zuru oke maka ụdị ihe omume niile, nzukọ na nzukọ. Emecha usoro nke mmezigharị mmezi ya na Febụwarị, Hilton Mandalay na-etu ọnụ ụlọ ngosipụta mara mma nke na-eme ka nka ụmụ amaala Myanmar mara mma.
A kpughere ụlọ oriri na ọ diningụ diningụ ụbọchị niile na-egosipụta ihe kachasị mma nke South East Asia na nri mpaghara n'oge na-adịbeghị anya yana ọdọ mmiri mara mma n'etiti ogige idyllic. Estlọ ndị ọbịa na-enye echiche dị egwu nke Mandalay Palace na Mandalay Hill a ma ama ma bụrụ nke edoziri maka mmezigharị zuru oke n'ọdịnihu dị nso. Hilton na-arụ ọrụ na Myanmar kemgbe Ọktoba 2014, na-esote nkwekọrịta dị mkpa na ụlọ ọrụ Eden Group Company Limited iji mepee ụlọ ise ha nwere na isi ebe dị na Myanmar. Hilton Nay Pyi Taw, Hilton Ngapali Resort & Spa na Hilton Mandalay emepeela kemgbe, ka akụ ndị ọzọ ga-esochi na Inle Lake, Yangon na Bagan n'afọ abụọ sochirinụ.
Kedu agwaetiti 20 kachasị mma n'ụwa? Izute ha na Indonesia…
Ihe niile malitere na New York: Na-asọpụrụ onye nchoputa UAE Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan
Hotellọ oriri na ọ Americanụ Americanụ American na Lodging nabatara ụkpụrụ nduzi ọhụụ nke CDC
Njem nleta maka ọdịnihu dị mma bụ isi na-elekwasị anya na Global Stage na ATM 2021
Barbados njem njem
Barbados Tourism na-achọ onye isi ọhụụ
Frankfurt Airport iji meghee Northwest Runway site na June 1